भविष्य - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
किन त्यहाँ भविष्यवाणीहरू छन्?
त्यहाँ जहिले पनि भविष्यवक्ता हुँ भनेर दावी गर्दछ वा विश्वास गर्दछ कि ऊ येशूको फिर्ताको मिति गणना गर्न सक्छ। मैले भर्खरै रब्बीको बारेमा एउटा रिपोर्ट देखे जुन नास्त्राडामसको भविष्यवाणीहरूलाई तोरहसँग जोड्न भनियो। अर्को व्यक्तिले भविष्यवाणी गरे कि येशूको फिर्ती पेन्टेकोस्ट २०१ at मा हुनेछ। धेरै भविष्यवाणी प्रेमीहरूले भर्खरको समाचार र बाइबल बीचको सम्बन्ध बनाउन प्रयास ...
तपाईंलाई थाहा छ सुसमाचार राम्रो समाचार हो। तर के तपाई वास्तवमै यसलाई राम्रो समाचार मान्नुहुन्छ? तपाईं धेरैलाई जस्तै, मेरो अधिकांश जीवनको लागि मलाई सिकाइएको छ कि हामी विगतका दिनमा बाँचिरहेका छौं। यसले मलाई एउटा विश्व दृश्य दियो जुन चीजहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा हेरे जुन संसारको अन्त्य हुने छ जुन हामीलाई थाहा छ आज केहि छोटो वर्षमा आउँछ। तर यदि मैले सोही अनुसार कार्य गरे भने म पहिले ...
प्रोक्सिमा सेन्टौरी भनिने पृथ्वी जस्तो ग्रहको खोजको बारेमा सुनेपछि यसले मलाई विज्ञान कथा फिल्मका दृश्यहरूको सम्झना गरायो। यो रातो निश्चित स्टार प्रोक्सीमा सेन्टौरीको कक्षामा छ। यद्यपि यो सम्भव छैन कि हामीले त्यहाँ बाहिरी जीवन पत्ता लगायौं (tr० खरब किलोमिटरको दूरीमा!)। जहाँसम्म, मानिसहरू जहिले पनि आफैलाई सोध्छन् कि हाम्रो बाहिरी मानव जस्तो जीवन छ कि छैन ...
कुन शरीरको साथ मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुनेछ?
सबै इसाईहरूले आशा गर्दछन् कि जब ख्रीष्ट देखा पर्नुहुनेछ तब विश्वासीहरू अमर जीवनमा उत्रनेछन्। त्यसैले कोरिन्थका चर्चका केही सदस्यहरूले पुनरुत्थानलाई इन्कार गरिरहेको कुरा सुनेर प्रेरित पावलले कोरिन्थीहरूलाई अध्याय १ 1 मा लेखेको पहिलो पत्रमा उनीहरूको समझको कमीलाई जोडदार ढंगमा तिरस्कार गर्नु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन। पहिलो पटक पावलले दोहोर्याइएको सुसमाचारको सन्देश थियो, जसमा उनीहरूले यो पनि दाबी गर्थे: येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो ...
भविष्यवाणीको रूपमा केहि बेचिदैन। यो सत्य हो। एउटा चर्च वा मिसनको एउटा मूर्ख ईश्वरता, एक अनौंठो नेता, र मूर्खतापूर्ण नियम हुन सक्छ, तर तिनीहरूसँग थोरै संसारको नक्शा, कैंची र अखबारहरूको थाक हुन्छ, प्रचारकसँग जो यथोचित रूपमा आफैंलाई अभिव्यक्त गर्न सक्दछन्, यस्तो देखिन्छ कि मानिसहरूले उनीहरूलाई बाल्टिनमा पैसा पठाउँछन्। मानिस अज्ञातसँग डराउँछन् र उनीहरूले ...
यदि हामी जान्दछौं कि हामी बाँच्छौं, बुनेका छौं र ख्रीष्टमा छौं, उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो र सबै कुराको उद्धार गर्नुभयो र जसले हामीलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुभयो (प्रेरित १२..12,32२; कलस्सी १: १ -1,19 -२०; यूहन्ना 20.१3,16- १)), हामी सबै "डर जहाँ हामी परमेश्वर संग खडा" को बारे मा डर र चिन्ता हटाउन सक्छौं र हाम्रो जीवनमा उहाँको प्रेम र मार्गनिर्देशन शक्ति को निश्चयतामा आराम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सुसमाचार शुभ समाचार हो, र वास्तवमा यो केवल केहि लागि मात्र होइन, ...
जब मानिसहरू अमेरिका र अन्य देशहरूमा शोकको दिन, सेप्टेम्बर १,, २००१ मा भेला भए, तिनीहरूले सान्त्वना, प्रोत्साहन र आशाका शब्दहरू सुने। यद्यपि शोकमा डुबेका राष्ट्रलाई आशा प्रदान गर्ने तिनीहरूको अभिप्रायको बिरूद्ध धेरै रूढीवादी क्रिश्चियन चर्चका नेताहरूले अन्जानमै यस्तो सन्देश फैलाए जसले निराशा, निरुत्साह र डरलाई बढावा दिए। अर्थात्, ती मानिसहरू जो आक्रमण नजिक छन् ...
तपाईको विचारमा विश्व मञ्चमा हुने सब भन्दा ठूलो घटना के हुनेछ? अर्को विश्व युद्ध? एक भयानक रोग को लागी एक उपचार को खोज? विश्व शान्ति, एक पटक र सबैको लागि? हुनसक्छ एक्स्ट्रास्टेरियल बुद्धिमत्ताको सम्पर्क हो? लाखौं इसाईहरूका लागि यस प्रश्नको जवाफ सरल छ: अब हुने सब भन्दा महान घटना येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो। सबै बाइबलको केन्द्रीय सन्देश ...
सहस्राब्दी प्रकाशको पुस्तकमा वर्णन गरिएको समय हो जुन अवधिमा मसीही शहीदहरूले येशू ख्रीष्टसँगै शासन गर्नेछन्। सहस्र वर्ष पछि जब ख्रीष्टले सबै शत्रुलाई तल झार्नुहुनेछ र सबै कुराको अधीनमा राख्नुहुनेछ, तब उहाँले राज्य पितालाई परमेश्वरमा सुम्पनुहुनेछ र स्वर्ग र पृथ्वीलाई फेरि बनाइनेछ। केही इसाई परम्पराहरूले सहस्राब्दीको शाब्दिक अर्थ ख्रीष्टको आगमन भन्दा एक हजार बर्ष पछि हुन्छ।
बाइबलमा यो लेखिएको छ: "परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ" (१ जने 1:))। उसले अरूको सेवा गरेर र माया गरेर भलाइ गर्ने मन बनायो। तर बाइबलले परमेश्वरको क्रोधलाई पनि औंल्याउँछ। तर शुद्ध प्रेम भएकोले कसरी रिससँग केही गर्न सक्छ? प्रेम र क्रोध एक अर्कासँग मिल्दैन। त्यसकारण हामी त्यो आशा गर्न सक्छौं कि प्रेम, राम्रो काम गर्ने चाहनाले क्रोध वा हानिकारक र विनाशकारी कुनै पनि प्रतिरोध समावेश गर्दछ। भगवान ...
मत्ती २ 24 ले "अन्त" को बारेमा के भन्छ
गलत अर्थ लगाउनबाट बच्न, मत्ती २ 24 लाई अघिल्लो अध्यायहरूको ठूलो संदर्भमा हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं मत्ती २ 24 को इतिहास अध्याय १, को पछिल्लो पद २१ मा सुरु हुन्छ भनेर जान्न चकित हुनुहुनेछ। त्यहाँ सारांश दिइएको छ: “त्यसबेलादेखि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यरूशलेम कसरी जाने र एल्डरहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै यातना भोग्ने कुरा देखाउन थाल्नुभयो…
“यो सत्य हो कि म जाँदैछु र तपाईंको लागि ठाउँ तयार पार्दछ, तर यो पनि सत्य हो कि म फेरि आउँछु र तिमीहरूलाई मकहाँ लैजान्छ ताकि तपाईं म भएको ठाउँमा जानुहुन्छ (यूहन्ना १ 14,3..)। के तपाईसँग कहिल्यै यस्तो चीजको लागि गहिरो इच्छा छ जुन चाँडै आउँछ? सबै इसाईहरू, प्रथम शताब्दीमा समेत उनीहरूले ख्रीष्टको आगमनको चाह गरे, तर ती दिनहरूमा र त्यस युगमा उनीहरूले एक साधारण अरामी प्रार्थनामा व्यक्त गरे: "मारानाथा", जसको अर्थ हो ...
पुनरुत्थान र येशू ख्रीष्टको फिर्ती
प्रेरित १: In मा हामीलाई भनिएको छ: "अनि जब उनले यसो भने, ऊ उठ्यो र बादलले उनलाई तिनीहरूको आँखाको अगाडि लिएर गयो।" म यहाँ एक साधारण प्रश्न सोध्न चाहन्छु: किन? येशूलाई किन यसरी हटाइयो? तर हामी त्यहाँ पुग्नु अघि हामी अर्को तीन पदहरू पढ्छौं: “अनि तिनीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर हेर्दा हेर, त्यहाँ दुई जना सेतो लुगामा तिनीहरू थिए। तिनीहरूले भने: तपाईं मानिसहरु ...
के तपाईंले कहिल्यै कसैलाई तपाईंको ढोका ढकढक्याएको चाहनुभएको छ कि एक धनी मामा तपाईंले सुन्नु भएन तर मर्नुभयो र तपाईंलाई ठूलो भाग्य छोड्नुभयो? कतैबाट पैसा आउँछ भन्ने धारणा अत्यन्तै रमाईलो छ, धेरै व्यक्तिको सपना र धेरै पुस्तक र फिल्मको आधार। तपाईको भर्खरको सम्पत्तीलाई तपाई के गर्नुहुन्छ? यसले तपाईंको जीवनमा कस्तो असर पार्दछ? उसले ...
के त्यहाँ अनन्त सजाय छ?
के तपाईंसँग कहिल्यै अनाज्ञाकारी बच्चालाई सजाय दिने कारण छ? के तपाईंले कहिल्यै भन्नुभएको छ कि सजाय कहिले अन्त हुँदैन? मसँग हामी सबैको लागि केहि प्रश्नहरू छन् जो बच्चा छन्। यहाँ पहिलो प्रश्न आउँछ: के तपाईंको बच्चाले कहिल्यै तपाईंलाई अनाज्ञाकार गरेको छ? ठीक छ, सोच्नको लागि केही समय लिनुहोस् यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न। ठीक छ, यदि तपाईंले हो सबै उत्तरहरू जस्ता उत्तर दिईएको हो, हामी अब दोस्रो प्रश्नमा आउँदछौं: ...
येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गरे अनुसार पृथ्वीमा फर्किनु हुनेछ र परमेश्वरको राज्यमा सबै जातिहरूको न्याय गर्नु हुनेछ। उहाँको दोस्रो शक्ति र महिमामा आउँदैछ। यो घटनाले पवित्र जनहरूको पुनरुत्थान र इनामको थालनी गर्दछ। (यूहन्ना १.14,3..1,7; प्रकाश १.24,30; मत्ती २..1०; १ थिस्सलोनिकी :4,15:१:17 - १;; प्रकाश २२:१२) के ख्रीष्ट फेरि आउनुहुनेछ? तपाईलाई के लाग्छ विश्व मञ्चमा हुने सब भन्दा ठूलो घटना हुन सक्छ? ...
युगको अन्त्यमा, परमेश्वरले सबै जीवित र मृतहरूलाई ख्रीष्टको स्वर्गको सिंहासनको अगाडि जम्मा गर्नुहुनेछ। धर्मीले अनन्त महिमा पाउनेछ, आगोको पोखरीमा भक्तिहीन दण्ड। ख्रीष्टमा प्रभु सबैका लागि अनुग्रही र न्यायपूर्ण प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, जसमा मृत्युदण्डको सुसमाचारमा विश्वास नगर्नेहरू पनि समावेश छन्। (मत्ती २:: -25,31१--32२; प्रेरित २:24,15:१:5,28; यूहन्ना:: २ 29-२20,11; प्रकाश २०: ११-१-15; १ तिमोथी २: -1--2,3; २ पत्रुस 6:;; ...
यदि हामी बुझ्छौं कि हामी बाँचिरहेका छौं, बुनेका छौं र ख्रीष्टमा छौं (प्रेरित १ 17,28:२), उहाँ नै जसले सबै चीजहरू बनाउनुभयो र सबै कुराको उद्धार गर्नुभयो र हामीलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुहुन्छ, हामी सबै हामी कहाँ छौं भन्नेमा चिन्ता र चिन्ता लिन सक्दछौं। खडा, तल राख्नुहोस्, र उहाँको प्रेम र मार्गनिर्देशन शक्ति जानेर हाम्रो जीवनमा साँच्चै आराम गर्न सुरू गर्नुहोस्। सुसमाचार राम्रो समाचार हो। वास्तवमा यो केवल केहि व्यक्तिको लागि मात्र होईन, तर सबैका लागि हो ...
स्वर्ग को सबै भन्दा साधारण वर्णन, एक बादल मा बसेर, एक रात का गाउन लगाएको, र एक वीणा बजाउने शास्त्रहरु स्वर्ग को वर्णन संग केहि गर्न को लागी छैन। यसको विपरित, बाइबलले स्वर्गलाई एउटा ठूलो चाडको रूपमा वर्णन गर्दछ, जस्तै सुपर-ठूलो ढाँचामा एउटा तस्वीर। त्यहाँ महान चखने खाना र महान कम्पनी मा राम्रो शराब छ। यो सबै समय को सबै भन्दा ठूलो विवाह को रिसेप्शन हो र उनको संग ख्रीष्ट को विवाह मनाईन्छ ...
सुसमाचारको अर्थ "राम्रो समाचार" हो। वर्षौंसम्म, सुसमाचार मेरो लागि राम्रो खबर भएको छैन किनकि मलाई मेरो जीवनको धेरै समयको लागि सिकाइएको छ जुन हामी विगतका दिनमा बाँचिरहेका छौं। मलाई विश्वास थियो कि "संसारको अन्त" केहि वर्षमा आउनेछ, तर यदि मैले त्यस अनुसार काम गरेँ भने म महा संकष्टबाट बच्न सक्नेछु। यस प्रकारको विश्व दृश्य लत हुनसक्दछ, जसले गर्दा विश्वको सबै चीजमा झुकाव हुन्छ ...
«अदालत आउँदैछ! न्याय आउँदैछ! अब पश्चाताप गर्नुहोस् वा तपाईं नरकमा जानुहुन्छ » सायद तपाईंले चिच्याउने प्रचारकहरूले त्यस्ता शब्दहरू वा यस्तै शब्दहरू सुन्नुभएको होला। उनको उद्देश्य हो: डरको माध्यमबाट श्रोताहरूलाई येशूको प्रतिबद्धतामा डो .्याउन। त्यस्ता शब्दहरूले सुसमाचारलाई बist्ग्याउँदछन्। हुनसक्छ यो अबसम्म "अनन्त न्याय" को छविबाट हटाइएको छैन, जसमा धेरै इसाईहरूले शताब्दीहरूमा त्रासको साथ विश्वास गर्थे ...
यदि भविष्य थिएन भने, पावल लेख्छन्, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु मूर्खता हो (१ कोरिन्थी १ 1: १))। भविष्यवाणी भनेको इसाई आस्थाको एक अत्यावश्यक र उत्साहजनक हिस्सा हो। बाइबल भविष्यवाणीले हामीलाई एकदमै आशाजनक कुरा बताउँछ। हामी यसबाट धेरै शक्ति र साहस प्राप्त गर्न सक्दछौं यदि हामी यसको मुख्य सन्देशहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं, विवादमा जान सक्ने विवरणहरूमा होइन। भविष्यवाणी अगमवाणीको उद्देश्य आफैमा अन्त्य हुँदैन - यसले अभिव्यक्त गर्दछ ...